Mawiricheya Akajairika Mukushandisa - Akafarirwa Sachigaro
Mawiricheya zvakagadzirirwa kubatsira avo vakaremara mumuviri kuti vadzokezve kufamba. Vanga vari rubatsiro rwakakura kune vachengeti vanofanirwa kutakura iyo remara munhu kubva kune imwe nzvimbo kuenda pane imwe. Mawiricheya vabatsira iyo remara kuwanazve imwe nzira yekuzvimirira muhupenyu hwavo. Tichatarisa zvino pamhando dzakasiyana dze Mawiricheya pamusika uye mashandiro avo.
mangwanani Mawiricheya aive emawoko uye ari nyore kushandisa. Dzakatanga semacheya akapfava uye mavhiri ebhasikoro akasungirirwa pachinzvimbo checheya makumbo, uye ipapo ruoko rwemaoko rwakagadzikwa patayi kubvumira mushandisi kuzvifambisa pachavo.
Kuita iyo wiricheya akadzikama, mamwe mavhiri akawedzerwa, kazhinji rimwe kana maviri madiki. Kana murwere aisakwanisa kushandisa rimu reruoko kusimudzira iyo wiricheya, zvibato zvakawedzerwa kumashure kwechigaro kuti mushandi agone kusundira murwere.
Kutsanangura Simba Chairs
Aya ndiwo maitiro wiricheya yemazuva ano yakagadzirwa uye ikozvino kune akawanda anotenderera kubva pane ino yekutanga dhizaini, kuti ikwane chero chero epanyama kuremara.
Magetsi mawiricheya emagetsi shandisa mabhatiri anodzoreka kumeta mota yemagetsi, iyo inozofambisa chigaro. Joysticks inoshandiswa kudzora kwese kufamba kwechigaro, kumberi, kumashure, kuruboshwe, nekukona kurudyi.
Mabhatiri anofanira kuchajwazve kana zvichidiwa. Zvoga Mawiricheya vane kugona kuona zvipingamupinyi munzira uye nekushandura mafambiro nenzira. Push bhatani ekudzora anowanikwa kune avo vasingakwanise kushanda the joystick.
Uropi hunodzorwa Mawiricheya ndiyo inonyanya kufambira mberi Mawiricheya iripo uye yakagadzirirwa avo vane acute kufamba matambudziko. Kufambisa kwechigaro kunodzorwa nehuropi hwekuda. Izvi Mawiricheya zvinodhura zvakanyanya zvakadaro; vanogona kubatsira zvikuru mumamiriro ezvinhu akanyanyisa.
Sports wiricheya Kusiyana
Mawiricheya izvozvi zviripo zvemarudzi mazhinji ezviitiko zvemuviri remara, zvakaita se mawiricheya emitambo yekutamba basketball nemimwe mitambo, terrain Mawiricheya yemhando dzemitambo, zvekufambisa Mawiricheya kune vafambi vanogara, Mawiricheya kunyanya kuvana uye kunyange Mawiricheya kune zvipfuyo zvine muviri kufamba matambudziko. Idzi dzese idzo spinoff dzepakutanga dhizaini asi iine imwecheteyo yekutanga basa - kufamba.
Mawiricheya zvakagadzirirwawo vanhu vane mamiriro akasarudzika sevaya vakaremara mitezo uye vakarasikirwa nekushandisa kwemuviri wavo wezasi pazasi pechiuno. Kumira uye kukwira masitepisi Mawiricheya kumwe kufambira mberi kwepakutanga wiricheya. Mawiricheya vakabvumira avo vane hurema hwomuviri kuwanazve kuzvimirira uye kuva vanoshingaira zvikuru munzanga.